चितवन महाधिवेशनको सन्देशः ‘ओली नै एमाले एमाले नै ओली’ « रिपोर्टर्स नेपाल
चितवन महाधिवेशनको सन्देशः ‘ओली नै एमाले एमाले नै ओली’
समाचार विश्लेषण । नेकपा एमालेको १०औं महाधिवेशन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली केन्द्रित बनेको छ । उद्घाटन अघि नै महाविधेशन ओलीमय बनाइएको थियो । ओलीलाई नै पुनः अध्यक्ष सदर गर्न जसरी महाविधेशन बोलाइएको देखियो ।
एमालेले उदघाटनमा एउटा वृत्तचित्र सार्वजनिक गर्यो । जसमा एमाले सरकारका पालमा भएका कामहरु उल्लेख गरिएको छ । ती कामहरु कस्ले गर्यो भन्दै केपी ओलीको नाम उल्लेख गरियो । वृत्तचित्तमा झण्डै सय पठक केपी ओलीको नाम लिइएको छ ।
हरेक पटक कस्ले काम गर्यो ? भन्दै जवाफ केपी ओली भनिएको छ । यसबाट पनि ओली केन्द्रित महाधिवेशन गरेको देखिदैछ ।
निश्चितरुपमा ओली एमालेमा सर्वशक्तिमान देखिन्छन् । एमाले फुटेपछि उनको प्रतिद्वन्द्वी कमजोर बनेका छन् । यसबीच उनको एकछत्र जस्तै प्रभाव हुनु स्वाभाविक हो ।
तर, ओलीलाई एमालेले देवत्वकरण गर्दै लगेको छ । एमाले नै केपी ओली र केपी ओली नै एमाले जस्तो बनाइएको छ ।
१०औं महाधिवेशनले एमालेमा ओलीको प्रभाव यति बढाइदिएको छ कि पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी जस्ता संस्थापक नेता देखि मदन भण्डारी जस्ता एमालेको सिद्धान्तका प्रतिपादकलाई पनि ओझेलमा पारिदिएको छ । अब एमाले ओलीपथमा जाने स्पष्ट संकेतहरु गरेको छ ।
ओलीविनाको एमाले परिकल्पना गर्न नसकिने जस्तो बनाइएको छ । उनलाई एमालेका अधिकांश नेताहरुले निर्विकल्प नेता भनिरहेका छन् । ओलीबाहेक कोही छैन जसरी प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ओलीले केही किर्तिमानहरु पनि बनाएका छन् । तर, राजनीतिक दलमा व्यक्ति हावी बनाउनु र कसैको देवत्वकरण गर्नु लोकतन्त्रका लागि अर्को जोखिम बन्न सक्छ । लोकतन्त्र पद्धति र प्रणालीबाट चल्ने हो । त्यसको संस्थागत विकास गर्न सके व्यक्ति त्यहीभित्र निश्चित पथ, विधि, विधानमा चल्नुपर्छ । तर, ओली नै एमाले र एमाले नै ओली जसरी देवत्वकरण गर्नु व्यक्तिको लहलहैमा र लहडमा कुनैपनि संस्था चल्ने परिपाठीको विकास गर्नु हो । यस्ले अर्को तानाशाह जन्माउनसक्छ । लोकतन्त्रमा व्यक्तिको सनकबाट हुनसक्ने अनेकनहरु संकटहरु निम्त्याउन सक्छ ।
संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन : ओलीको चेतावनी, सत्तापक्षको मौनता
मंसिर १७, काठमाण्डौ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यही मंसिर २८ गतेदेदि संसदको दुवै
न्यायालय विवाद : के होला अब ? यस्तो त तयारी
मंसिर १७, काठमाण्डौ । प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा होमिएको नेपाल बारको
काँग्रेस गण्डकी प्रदेशः कस्को कति शक्ति
काठमाडौं, १७ मंसिर । नेपाली काँग्रेस गण्डकी प्रदेश वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको गृहक्षेत्र हो ।
महाभियोगको ब्रम्हास्त्रः जोखिममा को को ?
दीपेश केसी, समाचार विश्लेषणः कुनै हालतमा राजीनामा नदिने अडान कसेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग
काठमाडौं, १७ मंसिर । जनतासँग नेतालाई डर ।
काँग्रेसको ६ वटा प्रदेश सभापतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता (को कहाँ सुचीसहित)
काठमाडौं, १७ मंसिर । नेपाली काँग्रेस प्रदेश सभापतिका लागि ६ वटा प्रदेशमा उम्मेदवारी दर्ता भएको
बागमतीको नतिजाले काँग्रेसको भावी सभापति देखाउने गगन थापाको टिप्पणी
काठमाडौं, १७ मंसिर । नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेता गगन थापाले बागमती प्रदेशको नतिजाले पार्टीको केन्द्रमा
ग्रिन सिग्नल पाएपछि नेविसंघ पूर्वसभापति रञ्जीत कर्ण प्रदेश २ को सभापतिको दौडमा
काठमाडौं, १७ मंसिर । नेपाली काँग्रेस प्रदेश २ को सभापतिमा संस्थापन इतर समूहले अझै पनि
काठमाडौं, मंसिर १८। लामो कूटनीतिक प्रयासपछि कतार सरकार १६ वर्षअघिको नेपालसँगको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्न
काठमाडौं, मंसिर १८। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा २५ वटा कम्पनीको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) र सातवटा
राप्रपा महाधिवेशनः नेतृत्व चुन्न मतदान आज
काठमाडौं, मंसिर १८। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को आगामी नेतृत्व चयनका लागि आज शनिबार मतदान हुँदै